५० वर्षकी आमाले फेबुकमा सेक्सी फोटो हाल्दा छोरीलाई टेन्सन, हेर्नुहोस् ५ फोटोहरु , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
५० वर्षकी आमाले फेबुकमा सेक्सी फोटो हाल्दा छोरीलाई टेन्सन, हेर्नुहोस् ५ फोटोहरु
एजेन्सी। सामाजिक संजाल पछिल्लो समय कसैलाई पनि चर्चित बनाउने सजिलो माध्यम भएको छ । हालै इङल्याण्डको सेन्ट हेलेंसकी क्याथरिन कर्मनले फेसबुकमा आफ्ना सेक्सी फोटो राखेर धुम मच्चाइन् । ५० वर्षकी क्याथरिक शिक्षिका रहिसकेकी छिन् र २ सन्तानकी आमा हुन् । तर उनी अहिले आफ्नो हट फोटोका कारण निकै चर्चामा छिन् ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि क्याथरिन सामान्य जीवन बाँचिरहेकी थिइन् र पारिवारिक जिन्दगीमा अल्झिएकी थियन् । एक दिन उनलाई लाग्यो कि उनलाई पनि आफ्नो जीवन बाँच्ने हक छ । । त्यसपछि उनले आफैंलाई पूरै परिवर्तन गर्ने सोच बनाइन् । क्याथरिनलाई लाग्यो कि मानिसले आफूलाई पनि माया गर्नुपर्छ । त्यसपछि क्याथरिनले फोटोसुटको बारेमा सोचिन् ।
क्याथरिनकी छोरी २० वर्षकी र छोरा १७ वर्षका छन् । क्याथरिन न कुनै मोडल हुन् न सेलिब्रेटी तैपनि उनलाई फिट र जवान देखिन मन लाग्यो । त्यसपछि उनले म्यानचेस्टर गएर फोटोग्राफर एन्ड्रयु उडसँग हट फोटोसुट गराइन् । फोटोसुटका बेला सुरुमा त उनी डराएकी थिइन् तर फेटोग्राफरले उनको हिम्मत बढाए । सुरुमा क्याथरिन फोटो अपलोड गरौं कि नगरौं भन्ने दोधारमा थिइन् । पछि भने उनले फोटो अपलोड गरिन् जहाँ उनलाई राम्रो कमेन्ट आएका छन् ।
फेसबुकमा क्याथरिनको फोटो देखेपछि उनकी छोरी एलिस भने निकै रिसाइन् । एलिसलाई उनको अपमान गरेको जस्तो महसुस भयो । उनले आफूलाई निकै लज्जित महसुस गरिरहेकी थियन् । निकै सम्झाएपछि मात्र उनले आमाको समर्थन गरिन् । क्याथरिनले यो फोटो पोस्ट गर्नुको उद्देश्य मानिसको सोचाइ परिवर्तन गर्नु भएको बताएकी छिन् ।